Iyo inonyanya kuzivikanwa indices yeSpanish stock market | Ehupfumi Zvemari
Iyo inonyanya kuzivikanwa indices yeSpanish stock market
Kunyangwe zvingafungidzwe nevazhinji vashoma nevapakati varimari, kune hupenyu hunopfuura chiyero chekuyera cheSpanish stock stock, iyo Ibex 35. Kubudikidza nenhevedzano yemasheya indices ayo echokwadi asinganyanyo kuzivikanwa asi ayo anogona kukubatsira iwe kufambisa vako varimi nekuenzana zvakaenzana chero nguva. Iwo ari akaderera mitero asi hongu haina mhindu-yemahara uye kunyangwe iine mukana wekudzokorora izvo muzviitiko zvakawanda zvingakushamise iwe Izvo, muchidimbu, imwe nzira yekudyara isiri nani kana yakaipa kupfuura yekutanga. Asi izvo zvinogona kuve zvinonakidza kwazvo kuita kuti kuchengetedza kwako kubatsire kubva ikozvino.
Hunyanzvi hwenyika huzere nemaindices madiki aunofanirwa kuziva kana chero nguva iwe uchinzwa muedzo wekuti inguva yekutengesa hunhu hwavo. Asi mupfungwa iyi, zvichave zvakakosha kuti iwe usvike pakuvaziva uye nekuziva zviri pamberi pako. Nekuti pakupera kwezuva iwe uchaisa panjodzi mari uye mune izvi chinhu, chero mhando yekuvandudza haina kukosha. Kana zvisiri, pane kudaro, iwe unenge usina sarudzo asi Iva neruzivo rwakanakisisa. Ndiyo vimbiso yakanakisa yekushanda mumisika yezvemari kuti ipedzwe neimwe budiriro.
Kubva pane ino mamiriro, iwe unowana ma stock stock indices emarudzi ese, mamwe anozivikanwa asi mamwe iwo echokwadi unenge usina kumbozvinzwa. Iyo yakakosha, kana iwe usina ruzivo rwakawanda murudzi urwu rwekushanda mumusika wemasheya. Asi chero zvakadaro, iwe unofanirwa kuziva kuti iwe haufanire kungo gumira wega kuIbex 35. Kana zvisiri, pane zvinopesana, uchave uine dzimwe nzira dzakawanda kupfuura iwe zvaunofunga kubva pakutanga. Hazvishamise kuti musika weSpain equity wakapfuma kwazvo kubva pakuona kwekusiyana uye unogona kunge uine zvimwe zvinoshamisa kubva ikozvino. Unoda here?
1 National indices: iyo MEFF
2 Diki Kapu Musika
3 Pakati peIbex mukombe
4 Latibex kana tsika dzekutaura chiSpanish
National indices: iyo MEFF
Kupfuura rondedzero yemasheya, iyo MEFF iri chaizvo boka remisika yemari mukati memari inoshanduka yenyika yedu. Nekuti zvirokwazvo, iro rakanyanya basa ndiko kutengesa, kugadzirisa uye kubvisa ramangwana uye sarudzo pazvisungo zvehurumende neIbex-35 stock index, pamwe neramangwana uye sarudzo pamasheya. Mupfungwa iyi, haugone kukanganwa kuti musika unozivikanwa seMEFF unoshanda seyekuchenesa imba yakachena uye yakapusa. Kune vanoita mari iwo musika wepamutemo uye nekudaro unodzorwa zvizere, kudzorwa uye kutarisirwa nevakuru vehupfumi. Kwazvinotora chinzvimbo chakakosha, zvese National Securities Market Commission uye Ministry yeEconomy pachayo).
Kubva pane ino maonero, chero munhu wechisikigo kana wepamutemo munhu, wechiSpanish kana wekunze, anogona kuva mutengi uye anoshanda mune ino yemari musika. Mune mamwe mazwi, ivo vanokwanisa kushanda pamwe nemari yavo yemari, kupfuura mamwe marudzi enzira dzekudyara. Ichi chinhu mukuita chinogadzirwa mukuti iwe pachako, kana uchida, unogona kuita mashandiro e kutenga uye kutengesa ramangwana uye sarudzo kubva zvino zvichienda mberi. Asi kuziva kuti mhando iyi yemabasa akakosha anotakura njodzi huru nekuti pane mari yakawanda yaungasiye munzira kana ukavhura zvinzvimbo kubva kune mamwe emari midziyo iyi.
Diki Kapu Musika
Imwe yemisika inonyanya kuzivikanwa yemari yemakambani emunyika mukombe mudiki kana musika wehomwe yemari. Hunhu hwakashata kwazvo hunosanganisirwa hunogona kukupa unopfuura dambudziko rimwe kana uchipinda kana kubuda pazvinzvimbo zvavo. Pakati pezvimwe zvikonzero, nekuti kune mashoma mazita anoshandurwa zuva rega rega. Ichi chokwadi chinogadzira kuti kune kunyanyisa kusagadzikana mumitengo yavo, nekutsauka mumitengo yavo inogona kusvika pfuura mazinga ari pamusoro pe5%. Zvichida ndeimwe yekukanganisa kukuru kwezvikumbiro zvemusika wemasheya kubvira nguva zhinji iwe usingazive zvaunotarisira, kungave kutenga zvikamu zvavo kana, asi, kutengesa.
Zvidiki-cap masheya, kune rimwe divi, anonyanya kutarisisa kune anoshamisa emitengo spikes. Uine yakanyanya kukwirira kumusoro kumusoro uye mune chero mamiriro ezvinhu pamusoro pemitengo yakanyorwa muSpanish equity benchmark index. Kunyangwe nekuda kwechikonzero ichocho, iwe unogona kuwana kwakakura kwazvo kudonha uko kunogona kukutungamira iwe kurasikirwa nechikamu chakakosha kwazvo chemari yako yekudyara. Ehe, izvi zviito zvinoda kudzidza mumisika iyi yakaoma kwazvo.
Pakati peIbex mukombe
Iyo indekisi yepakati-capitalization chengetedzo ndeimwe yeinonyanya kufadza mumusika weSpanish wemusika nekuda kwehunhu hwayo. Hazvishamise kuti iwe unogona kuwana mamwe emasheya akakosha ayo anotogovera zvikamu pakati pevachagovana navo. Iine yakagadziriswa uye yakavimbiswa purofiti iri padyo ne5% nhanho. Imwe yeiyi mienzaniso yakajeka inomiririrwa nemakambani senge Atresmedia kana NH Hoteles. Ndiyo imwe yemisika inokanganikwa nevashambadzi vadiki nepakati. Kusvika padanho rekuti vanovatadzisa kurasikirwa nemikana chaiyo yemabhizinesi ekuti vashandise zvakanyanya mari yavo.
Iyi indekisi muzvikamu zveSpanish, inonziwo Ibex mukombe wepakati, inozivikanwa zvakanyanya mukuti inowirirana kune vese ma profiles. Kubva kune vane hasha kune avo vanoda kuchengetedza capital yavo pamusoro pezvimwe zvinhu zvehunyanzvi uye pamwe kunyangwe kubva pakakosha maonero. Ivo vese vane nzvimbo muboka revashambadzi iro rinounganidza pamwechete chikamu chakanaka chemakambani akakosha kwazvo munyika. Uye chero zvazviri, vanoshuvira nguva dzese kuti vabatanidze indekisi yekusarudza yemusika wemusika wenyika, iyo Ibex 35.
Latibex kana tsika dzekutaura chiSpanish
Uyu ndiwo musika wezvemari nekuti unobatanidza zvese kuchengetedzeka kwenyika nemakambani ayo iwo akanyorwa pane chiLatin stock exchange. Kuuya kubva kuArgentina, Brazil, Chile, Colombia uye chikamu chakanaka chenyika dzenzvimbo ino yakakosha yenzvimbo kune rimwe divi reAtlantic. Kubva pane ino mamiriro, zvakajairika kuti iwe unogona kuwana kuchengetedzeka kuri kutengesa paIbex 35, sezvazviri kune mamwe machipisi ebhuruu senge Endesa, Iberdrola. Repsol kana Banco de Santander pachayo. Kune rimwe divi, pane chimwe chinhu chingakushamise nezve iyi atypical index uye ndeyokuti migove yayo inotengeswa kubva kuSpain.
ILatibex ndeimwe yemakisi akanyanya kufumurwa kune nyika dzichangobuda nekuda kwekuumbwa kwemaitiro avo. Izvi zvinoreva kuti mashandiro ako inotakura njodzi dzakawanda kupfuura mune inonzi misika yechinyakare. Ndokunge, iwe unofanirwa kuve wakanyanya kuchenjera kana uchivhura nzvimbo kana iwe usiri kuda kutambura chero mamwe matambudziko kubva zvino zvichienda mberi. Kusvika padanho rekuti iwe uchafanirwa kuve wakanyanya kuchenjera pakusarudza machengetedzo anozoita yako portfolio yekudyara kwemakore mashoma anotevera. Kunyangwe pasina kuwedzera kwemitero yekomisheni iwe yauchazosangana nayo pakutenga uye kutengeswa kwemasheya mumusika wemasheya uyu. Pasina kana mutsauko pamitengo yakashandiswa kubva kumasangano emari.
Pakupedzisira, inoratidza musika wakaomesesa pane ese, senge Imwe nzira Stock Market (MAB) umo makoshero ekufungidzira ezvematongerwo enyika akabatanidzwa. Kuburikidza nenhevedzano yezvivimbiso zvakanyorwa, panzvimbo pemitsetse yebhizinesi yavanomiririra, nezvakatarisirwa zviri kugadzirwa mumisika yemari. Mune ino chaiyo kesi, iko kushomeka kunoratidzika kuve kune chisimba zvakanyanya, nemisiyano inonyatsopfuura mwero we10% kana kunyangwe ane hukasha muzana. Ichokwadi kuti iwe unogona kuwana mari yakawanda nemitengo iyi, asi nechikonzero chimwe chete ichi, unosiya akawanda mairi munzira. Hazvishamisi kuti njodzi yakanyanya uye haingaenzaniswi nemamwe mareti emasheya.
Iyo Imwe Inotengesa Soko haina kukodzera kune ese ma profiles revashambadzi vadiki nepakati. Kana zvisiri, pane zvinopesana, vatengesi vanofungidzira chete avo vanoda kuita mari yakawanda munzvimbo pfupi yenguva. Uye zvakare, iwe unomhanyisa njodzi yekuti makambani akanyorwa pane iyi stock index angatadza. Kana, kukundikana izvo, kumisa kutengeserana semhedzisiro yezvinetso zvebhizinesi, sezvakamboitika mumakore apfuura nemamwe maitiro akasarudzika. Chero zvazvingaitika, ndeimwe yezvinonetsa kwazvo kwaunogona kuisa mari yako yezvipo zvemari.
Sezvaungave iwe waona, musika wemasheya haungoderedzwa chete kune Ibex 35, asi nekusiyana, une mikova mizhinji yakavhurika kuti uite zvinzvimbo zvako muzvikamu zveSpanish zvibatsire. Mune zvimwe zviitiko zvinonyanya kutarisirwa kune imwe kirasi yemaprofiles emari kupfuura mamwe. Nekuti pane dzakawanda dzimwe nzira dzauinadzo pamberi pako, kunyangwe kubva kumisika yemari yawanga usati wanzwa nezvayo kana yaivapo. Yenguva yekuvatarisa uye kuongorora kuti zviri nyore here kuti iwe uzarure zvinzvimbo mune zvimwe zvacho.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » Zvigadzirwa zvemari » Iyo inonyanya kuzivikanwa indices yeSpanish stock market
Ismenia Villarroel akadaro
Ruzivo runonakidza uye rwakakwana ndatenda, ini ndinotora mukana wekukuudza nezvejaya iro, nekuda kwekutsungirira kwake uye nzira dzakabudirira, vauya kuzomuronga saiye tenzi wezvekutengesa, Fernando Martínez tejedor, kubva mudiki kwazvo waakashinga kupinda nyika yezvemari, Iye parizvino muridzi wemabhangi chaiwo, makambani semushambadziri, uye anozivikanwa pasi rese semuunganidzi wemabasa eumhizha uye epamberi pevhu.
Pindura Ismenia Villarroel